(Hadhwanaagnews) Monday, April 16, 2018 09:28:36
Dawladda hooseba iyadoo weliba waafaqsan saami qaybsigan la sheego had iyo jeer. Suldaanadu iyo Caaqiladu waxay aqoon u leeyihiin
Somaliland waxaa isa sudhan Digreeto madaxweyne oo nin masuula ah meel loogu dhiibaayo iyo ninkii masuul ka ahaa oo og in Caaqilo iyo Suldaano magaciisa Madaxweynaha u geeyeen. Arintani waa halka Xukuumadaha Somaliland ay salaaddoodu ka xidhmi la'dahay ee dadkii aqoonta lahaa iyo kuwii waxbarashada ku jiray iyo maamulka wadanka sida ( practical) ee wax u socdaan waanay is waafiqi la yihiin. Matalan ninka Badhisaab Digreeto madaxweyne lagu magacaabaa waxay tahay cilmiyan inuu ninkaasi aqoon jaamacadeed iyo wixii (equivalent) haystaa oo aaf uga soo shaqeeyey wasaaratul Daakhiliyah masuuliyadaheeda kala sarreeya, waa inuu shaqada wasaaratul Daakhiliyah khibrad u leeyahay heer wadan, heer gobol iyo heer Degmoba. Waa inuu yaqaan siday u wada shaqeeyaan madaxda Booliiska ee Gobol iyo
Dawladda hooseba iyadoo weliba waafaqsan saami qaybsigan la sheego had iyo jeer. Suldaanadu iyo Caaqiladu waxay aqoon u leeyihiin dhaqanka Somaliga, Afsomali reeraha lagula hadlo, qaybaha reeraha laakiin shaqada wasaaradaha iyo hab maamulka dawladda ee iyo cilmiga lagu shaqeeyo aqoon uma laha. Markaa nin masuula meel laga bedelo waxaa uu suldaan iyo Caaqil ugu cararayaa waa Digreetadii lagu magacaabay ayey wax ka qaldanaayeen markaa mar walba albaabkii qaldanaa ee uu ka soo galay buu ka baxaa masuulkaasi, wadankana buuqbuu geliyaa. Dembigaa yaa leh, anigu markaan shiilay arintaa waa Dembi madaxweyne oo ah hab maamul qaldan oo ninba meel ku gufeeya.